Guddoomiyihii Rugta Ganacsiga Jubbaland oo Qarax lagu dilay | KEYDMEDIA ONLINE
28 November 2020 Turkiga oo cambeereeyay qaraxyo ka dhacay Muqdisho
Guddoomiyihii Rugta Ganacsiga Jubbaland oo Qarax lagu dilay
Guddoomiyaha iyo ilaalada ayaa ku sugnaa banaanka hore ee Masjidka Jaamac oo ay Salaadda Jimcaha ku dukadeen.
MUQDISHO, Soomaaliya- Guddoomiyihii Rugta Ganacsiga Jubbaland Shaafi Raabi Kaahin ayaa goordhaweed u geeriyooday dhaawac halis ah oo ka soo gaaray qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada Kismaayo.
Guddoomiyaha ayaa qaraxa lala beegsaday xilli uu ka soo baxay Masaajid uu ku dukaday Salaaddi Jimca maanta, waxaana qaraxa sidoo kale ku dhaawacmay qaar ka tirsan ilaaladiisa.
Ugu yaraan saddex ruux ayaa ku geeriyootay qaraxa oo uu jiro ruuxii ismiidaamiyaha ahaa, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 7 ruux.
Warar 29 November 2020 23:38
Maxay Dowladda Farmaajo u cayrisay Safiirka Kenya?
Warar 29 November 2020 22:57
DF oo u yeertay Safiirka Soomaaliya ee Kenya
Warar 29 November 2020 21:37
Geelle oo taageeray jabka TPLF, gacaltooyana u muujiyay Itoobiya
Warar 29 November 2020 19:42
Xildhibaan Mustaf Dhuxulow oo lagu xiray Somaliland